हामीसँग प्रमाणको अभाव छैन : माधवकुमार नेपाल [अन्तर्वार्ता] - MadhavNepal.com
९ जेष्ठ, काठमाडौं । लिम्पियाधुरासहित समेटेर नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको तरंग नेपालभित्रमात्रै सीमित छैन, छिमेकी भारत र चीनसम्म पुगेको छ । यही विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
यो सबै कुरा आजै गरेर भएन । कोरोनाले गर्दा दुई अर्ब मान्छे मरे भने के होला ? धर्तीमा ठूलो प्रलय आयो भने के होला ? भन्ने कुराले हुँदैन । तत्कालका निम्ति सोच्नुपर्ने कुरा त होला । सोच्दै नसोच्ने कुरा होइन । त्यस्ता कुराको जवाफ दिने सवाल आउँदैन । विकल्पको विषयमा ‘इन हाउस’, ‘इन डोर’ छलफल गर्नुपर्छ । त्यसबारे सबै पक्ष केलाउनुपर्छ । तयारी सबै गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामी अदातल जान्छौं, यो गर्छौं, उ: गर्छौं भन्ने होइन । यो विकल्प उपयुक्त हो पनि भन्दिनँ, उपयुक्त छैन पनि भन्दिनँ । यस्ता विषय बाहिर मिडियामा कराएर, उफ्रेर भन्ने कुरा होइन । स्रोत : कान्तिपुर जेष्ठ ९, २०७७